Inona no fitaovana maoderina maoderina tsara indrindra? - Ny Semalt Anwer
toerana samihafa. Ireo fitaovana ireo dia tena manampy tokoa ny fanombohana, ny mpitoraka blaogy, ny mpikirakira hafahafa ary koa ny fandraharahana ara-barotra sy lehibe. Azon'izy ireo atao ny manaparitaka na manaparitaka ny angon-drakitra na manova azy, maka vaovao vaovao sy misy ary mitahiry izany ho an'ny fahazoana mora.
Bixo dia tranokala ara-barotra ary fitaovana fandinganana angona . Izy io dia fitaovana fitrandrahana harena an-kibon'ny loharanom-baovao mivelatra izay mandroso toy ny andiam-panodinana cascading ary manangana fampahalalana manokana ho anao, manangona azy amin'ny loharano maromaro. Azonao atao ny mampiasa azy io ho an'ny orinasa madinika sy lehibe ary mamonjy ireo angona ilaina amin'ny fiara sarotra miaraka amin'ny kitiho.
DEIXTo koa fantatra amin'ny hoe AEiXTo. Izy io dia iray amin'ireo fitaovana mahery vaika mahomby sy mahatalanjona izay mifototra amin'ny model W3C Document Object. Izany dia mamela anao manaisotra data marina ary afaka mandamina ny rakitrao amin'ny endritsoratra alfabeta. Izany dia manome fahafahana mora amin'ny safidy samihafa. Ankoatr'izay dia afaka manamboatra ny fotoana sy ny fomba fametahana tranokala ianao. Mamonjy fotoana, ezaka ary hery izy io.
Ny iray amin'ireo kirany sy mahasalama indrindra amin'ny tranokala manararaotra sy ny fandihizana. Izy io dia toy ny tranokala fitrandrahana anaty ala ho an'ireo mpisera Python ary manana fitaovana mifandraika amin'ny API, Google, HTML DOM ary ny Twitter. Tsy vitan'ny hoe manakona sy manaparitaka ny tranonkalanao fa mandrindra ihany koa ny angon-drakitra mahasoa ary manomana tahiry araka ny zavatra takinao.
Scrappy dia fitaovam-pihetsiketsehana ara-barotra amin'ny Internet izay misy loharano mivelatra sy rafitra iraisana. Manampy amin'ny fampiroboroboana ny angona avy amin'ny tranokala kely sy lehibe. Ny mpampiasa dia mametraka fitsipika momba ny fitrandrahana angon-drakitra ary mamela ny Scrapy hanao ny sisa. Voasoratra ao amin'ny Python ary mikitika amin'ny BSD, Mac, Windows, ary Linux.
80legs dia tambajotra mahery vaika sy malaza izay miaraka amin'ny safidy Custom Web Crawling ary karazany hafa. Afaka manangona pejy maherin'ny dimy tapitrisa ao anatin'ny ora iray izy, ary ny fonosana fototra dia manome tolotra maimaim-poana maherin'ny 12,000 ny crawls URL. Na izany aza, ny dikan-dikan-drakitra voalohany dia lehibe amin'ny fampiasana ara-barotra sy vola lany ny $ 40 isam-bolana Source .